Manome rariny ny mpanohitra Ravalomanana | NewsMada
Manome rariny ny mpanohitra Ravalomanana
« Rariny ny hetsika ataon’izy ireo ary tsy manome tsiny izahay satria tsy misy mihaino izy ireo… Azo atao ny miroso amin’ny fifidianana mialoha ny fotoana, toy ny any Venezuela ohatra, nitaky izany izy ireo. Miankina amin’ny besinimaro na ny fifanarahana politika anefa izany ary dinihina eo ambony latabatra », hoy ny filoha teo aloha, Ravalomanan, omaly tetsy Ankorondrano. Nohitsiny anefa fa tsy azo teren-ko masaka izany rehetra izany ary tsy tokony ho lasa ohatra ratsy isika raha tsy manaja ny dingana ara-demokratika.
Anisan’ny anton-diany teny ny fihaonana amin’ny solontenan’ny Vondrona eoropeanina eto amintsika ka nilazany fa mila fifampitokisana amintsika ireo mpamatsy vola. « Tsy eo amin’izy ireo ihany anefa fa eo amin’ny vahoaka sy ny mpitondra ary koa izahay mpanao politika. Ilaina izany fifampitokisana izany », hoy ihany izy.
Fifidianana madio sy mangarahara
Nambarany fa ilaina hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra iraisam-pirenena, toy ny Pnud sy ny ONU satria tsy afa manao na inona na inona eto isika. Ankoatra izany, nanaitra ny eo anivon’ny Antenimieran’ny varotra ny tenany mba handraisan’izy ireo andraikitra momba ny fananany, etsy amin’ny Magro Ankorondrano satria misy mangalatra ireo fitaovana sasany eo. Nohitsiny fa tsy maintsy hisokatra ny Magro satria efa eo ny sori-dalana avy amin’ny Sadc.
Nitodika amin’ny mpanao gazety ny tenany nilaza fa tsy tokony hampiady ny mpanao politika ny mpisehatra amin’io asa io. « Any aminareo ny fanalahidy… Ny misy sy ny marina ambara », hoy izy.